Blockchain News 13 Janoary 2018 - Blockchain News
Janoary 13, 2018 Admin
Olom-pirenena Koreana Tatsimo manohitra cryptocurrency varotra fandrarana
JTBC, Koreana Tatsimo ny firenena maneran-tariby TV harato sy fandefasana orinasa mitatitra ny governemanta Koreana Tatsimo “tohina” amin'ny olom-pirenena ny isan'ny nangataka ny fanesorana ny Minisitry ny Fitsarana sy Minisitry ny Vola ho an'ny tsena fanodinkodinana.
100K sonia no nametraka ny mandà ny varotra cryptocurrency fandraràna soso-kevitra.
30K sonia dia nalefa amin'ny firaketana noho ny fanesorana ny minisitra roa.
Twitch izao manaiky Bitcoin fanompoana ho an'ny famandrihana mivantana
Twitch, izao tontolo izao lehibe indrindra lahatsary lalao mivantana service Bitcoin izao manaiky fa ny asa mivantana famandrihana.
Twitch no tompony Amazon.
Twitch dia mampiasa Bitpay noho ny fanodinana ny Bitcoin varotra.
Powerstations herinaratra roa novidina tany Rosia ho ahy cryptocurrency
Hery herinaratra roa-peo any Rosia namidy noho ny tanjon'ny cryptocurrency fitrandrahana, nitatitra ny gazety Kommersant, nanonona loharanom-baovao. Io no voalohany fifanarahana toy izany ao amin'ny firenena.
Hery roa toby any Perm Region, amin'ny andrefana tehezan'i Afovoany Tendrombohitra Oural, sy ny manodidina Repoblikan'i Udmurtia. Ny trano dia ho ampiasaina mba hamoronana tahirin-kevitra Foibe sy ny foibe ho an'ny fitrandrahana cryptocurrency, nitatitra ny gazety.
Ny toby dia voalaza fa vidin'ny about 160 tapitrisa robla (ny US $ 3 tapitrisa) Ny tatitra vaovao tompon'ny fahefana toby, mpandraharaha Aleksey Kolesnik, dia tsy mivantana nanamafy ny fahazoana, nefa nilaza fa cryptocurrency fitrandrahana dia azo atao ihany no ho Rosia rehefa mandany ny lalàna manan-danja.
Ny Blockchain dia nizara lisitra teknolojia izay mampiasa ny nizara, fitongilànana, nizara, replicated lisitra izay mety ho bahoaka na manokana, mihidy na azon'ny ho fandraisana anjara, ary koa mifototra amin'ny tokenized cryptoeconomics na tsy mampiasa famantarana. Ny antontan-kevitra ao amin'ny boky firaketana dia tsy maintsy ho tsy miova, foto-kevitra maso sy manao fanamarinana, miaro ny Fifidianana Akama sy ny fanomezana ny fahamarinana Uncensored.
"Bitcoin dia manome antsika, voalohany, lalana ho an'ny mpampiasa aterineto iray mba hamindra tsy manam-paharoa tapa-nomerika fananana hafa mpampiasa aterineto, fa toy ny famindrana azo antoka fa voaro sy azo antoka, ny rehetra dia mahafantatra fa ny famindrana nitranga, ary tsy misy olona afaka mifaninana ny ara-drariny ny famindrana. Ny vokatry ny fandrosoana izany dia sarotra ny overstate. "
Mihevitra izy ireo fa ...
Previous Post:Blockchain News 12 Janoary 2018
Next Post:Blockchain News 15 Janoary 2018